सिड्नीका पोलपोलमा नेपाली विज्ञापन - Nepali Page
३ कार्तिक २०७६, आईतवार १०:०७ 825 पटक-पढिएको
नेपालीहरूको संख्या भन्दा पनि गतिविधी र चलखेलका कारण सिड्नीमा कतै नेपाली कै बहुलता त छैन भन्ने लाग्नु सामान्य हो। भ्रमै सही टिकटोक र फेसबुकका चर्तिकलाले त्यही झल्को दिन्छ। हुन त नेपालबाट अष्ट्रेलिया भनेसी आँखा चिम्लेर हान्निनेको संख्या बढेको बढ्यैछ। पढेर सकेपछी बागबजारका ‘ईन्स्टिच्यूट’ले दिने ‘शर्टिफिकेट’को जति मात्रै मान्यता हुने खालका ‘एक्रिडिटेसन’ नभएका कोर्षमा भर्ना भएर पढाई सकिने बेलामा पढेको केही काम नलाग्ने थाहा पाउने नि बढेकै छन्। अष्ट्रेलिया आएपछी आईफोन, ओपेरा हाउस र यसो पार्टि ईभेन्ट र नेपाली फिल्म प्रदर्शनमा चहलपहल नदिने हो भने नेपालमा नि नगन्लान् भन्ने भईहाल्यो। जसले गर्दा सिड्नीमा नेपाली चहलपहल धेरै छ। त्यसो त कामको प्रकृतिका कारण पनि नेपाली अनुहार सिड्नीको भिडमा धेरै देखिन्छ।
यो पनि पढ्नुस: नेपाली लाइसेन्सले अष्ट्रेलियामा गाडी चलाउनु हुन्छ? यी कुरा बुझ्नुस् पहिले
नेपालीहरूको चहल पहलसँगै कार्यक्रम र सिनेमा प्रदर्शन बढेपछी विज्ञापनको हल्ला खल्ला नबढ्ने त कुरै भएन। फेसबुकका ग्रुपमा धेरै विज्ञापन हाल्न नदिने, फेसबुक र युट्युबका टेलिभिजनको प्रभावकारिता थाहा नभएको अवस्थामा विज्ञापनको दरिलो माध्यम साना कार्यक्रम आयोजकलाई बिजुलीका पोल भएका छन्। भित्ताहरू त धेरै उपलब्ध छैनन् पर्चा टाँस्नका लागी। अनि आफ्नै व्यवसाय गर्छु वा आफ्नै सिपले केही गर्छु भन्नेका लागी पनि पोल चाहिँ विज्ञापन गर्ने राम्रो माध्यम हो। विशेष गरेर बाटो काट्ने ठाउँमा राखिएका पोलहरू जसमा पैदल यात्रुले बाटो काट्नका लागी सडकका सवारी रोक्न दबाउने ‘स्वीच’ सहितको भाँडो टाँसिएको हुन्छ तिनले विज्ञापन गर्नमा निक्कै सघाउँछन्। ’cause सडकका सवारी रोक्न दबाउने ‘स्वीच’ सहितको भाँडो टाँसिएको माथि पट्टीको भागमा करिब करिब सबै पैदल यात्रुको आँखा जान्छ। मुख्य शहरहरूमा कोठा भाडामा रहेको सूचना नै धेरै टाँसिन्छ। चिनियाँ र भारतीयहरूको विज्ञापन धेरै देखिन्छ पोलमा त्यसो त अरू मूल राष्ट्रियता भएकाहरूको विज्ञापन पनि कम हुँदैन। यस्तै पोलमा नेपालीहरूका सेवाका सूचना पनि टाँसिने गरेको भेट्न सकिन्छ आजकल। विशेष गरेर नेपालीको घनत्व धेरै भएका ठाउँमा। ओबन, रकडेल, हर्स्टभिल, लिडकम, क्याम्सी लगायतमा यस्ता विज्ञापन देख्न सकिन्छ।
यो पनि पढ्नुस्: सिड्नी शहर हेर्दा लाग्छ रहर…
क्याम्सीको रेल बिसौनी नजिकै रहेको सडकको बाटो काट्ने ठाउँमा भने यस्तो नेपाली भाषामा नै कपाल काट्ने सेवा दिने एकजनाको विज्ञापन देखियो। १० डलर भनेको सिड्नीमा कपाल काट्नको लागी निक्कै सस्तो दर हो। यसमा भने अनुसार त्यो पनि घरमै गएर काटिदिने भनेपछी झन सुविधाको कुरा। क्याम्सी तिर बस्नेहरूले यसको फाइदा लिनुस् है!
तपाईं सँग पनि यस्ता सीप छन् र नेपाली समुदायका सदस्यलाई सुपथ दरमा सेवा दिनसक्नुहुन्छ भने यस्तो उपाय लगाउँदा पनि राम्रो हुन्छ। सेवा लिनेलाई नि सस्तो सिप हुनेलाई नि सिपको सदुपयोग।
सम्बन्धित शब्दहरू अष्ट्रेलिया अष्ट्रेलियामा कमाई अष्ट्रेलियामा काम अष्ट्रेलियामा नेपाली नेपाली विद्यार्थी विज्ञापन सिडनी सिड्नी सिफारिस गरिएको स्टुडेन्ट
अघिल्लो अष्ट्रेलियामा घर किन्ने योजना छ भने ‘सपिङ’मा दिनुस ध्यान
पछिल्लो अवसरसँगै पानीको समेत संकट छ रिजनल अष्ट्रेलियामा
वेलायतमा हत्या भएकी नेपाली युवतीका पूर्वपतिले हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन्। बेलायती प्रहरीले ३० वर्षका हफिज शरिफले नेपाली युवती सुभेक्षा बुढाथोकीको उनकै घर बार्थोलोम्यू स्ट्रीट, हाईफील्ड्स, लेस्टरमा हत्या गरेको स्वीकार गरेको जनाएको छ।